WAXAAN KU FARAXSAN YAHAY FURSADAHA.
Howlwadeenka websaydhkan ayaa sidoo kale ah ururka 'PixelHELPER International' ee Morocco.
Farshaxanada caalamiga ah ee ka shaqeeya wadajirka waxaa si rasmi ah u matalaya dalladda dalladda:
PixelHELPER Caalamiga ah
Maamulaha Agaasimaha: Oliver Bienkowski
Xukunka ayaa ah Marrakech, Morocco
Oo waxaan dhahnaa: Waxaan nahay PixelHELPER. Tani waa ogeysiiskayaga sharciga ah. Haddii aad rabto inaad na dacweyso, waxaan kugula talineynaa garyaqaan wanaagsan oo jooga Morocco. Dhamaan wada-hawlgalayaasha kale, saaxiibbada & taageerayaasha, boggan waxaa ka shaqeeya hay'adda caalamiga ah ee PixelHELPER International ee Morocco. Si wadajir ah kooxaha kale ee PixelHELPER ee ku yaal Brazil, Yurub & Aasiya waxaan ula dagaallameynaa xuquuqda aadanaha & gargaarka degdegga ah ee isdhexgalka ee tooska ah ee dijitaalka ah. Dunida oo dhan.
Ku qanci naftaada shaqadeena qiimaha badan ee ku saabsan warbixinnada waxqabadkayaga. Ma ka weyn tahay 55? Ehelkaagii miyuu ku sii dhacayaa neerfahaaga? Dardaaran samayso oo qaarkeed ugu deeqo xuquuqda aadanaha ka hor inta ay goori goor tahay.
Iyada oo kubixineysa euro kasta oo tabarucaada ah, waxaan ku hirgalin karnaa mashruucyo farshaxan oo waara, waara oo loo ilaalin karo bini-aadamka. Isla mar ahaantaana, waad u istcimaali kartaa foomkeena ku-deeqidda si aad u sameyso tabarucyo la beegsaday oo loogu talagalay gargaarka horumarineed ee Afrika ama mashaariicda deegaanka.
Mudaaharaad ka dhacay Safaaradda Sacuudi Carabiya
Taageeraha PixelHELPER Nuseir Yassin safarkiisa adduunka ee Rubic Cube
Sawirka PixelHELPER July 1st, 2020Oliver Bienkowski